रवीन्द्रकाे उत्तराधिकारीका रुपमा आएका पर्यटनमन्त्री भट्टराई किन आलोचित ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
रवीन्द्रकाे उत्तराधिकारीका रुपमा आएका पर्यटनमन्त्री भट्टराई किन आलोचित ?
डेढ महिनादेखि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानमन्त्री बन्दै गर्दा योगेश भट्टराईलाई बधाई र शुभकामनाको ओइरो लागेको थियो । समाजिक संजाल र सञ्चार माध्यम उनको प्रशंसाले रंगिएका थिए । कतिले त प्रधानमन्त्री नियुक्तभन्दा बढी प्रचार भएको टिप्पणी पनि गरे ।
किन यस्तो अवस्था आयो ? यसका पछाडि उनले गरेका केही प्रतिनिधिमुलक काम जिम्मेवार छन् । उनले गरेको ‘पशुपतिको गंगा आरतीमा राष्ट्रिय गान’ बजाउने निर्णय निकै आलोचित छ । ‘राष्ट्रिय जगेर्ना गर्ने नाममा आर्यघाटनजिक हुने आरतीमा राष्ट्रिय गान कति अनिवार्य हो रु ’ नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठेको छ ।